१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन माग गर्ने एमालेको तेस्रो धारका नेताहरुलाई ओलीको ‘लोप्पा’ ! – Butwal 24 News
September 24, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन माग गर्ने एमालेको तेस्रो धारका नेताहरुलाई ओलीको ‘लोप्पा’ !
काठमाडौं । नेकपा एमालेको तेस्रो धारका नेताहरु पार्टी एकता गर्न बनाइएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै केन्द्रिय कमिटी बैठकमा सरिक नहुने भनिरहेको बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको ठाडै प्रतिवाद गरेका छन् ।
एमाले तेस्रो धारका नेताहरुको मागे र अहिलको बैठकको एजेण्डा फरक रहेको भन्दै ओलीले उनीहरुको मागको ठाडो प्रतिवाद गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले शुक्रबारको बैठकमा भने, ‘यो बैठकका एजेण्डा फरक छन् । विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित एजेण्डा भएकाले यससँग केन्द्रित रहेर मात्रै छलफल हुन्छ । तपाईंहरुको यो माग यो बैठकको एजेण्डा नै बन्न सक्दैन ।’
महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे प्रस्ताव हुबहु नहुने बताइसकेका छन् । उनले १० बुँदे हुबहु भन्दा पनि रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।